वास्तु मिलेको घरमा बस्दा मिल्छ सुख, सौभाग्य र आयु आरोग्य, हुन्छ वृद्धि !! | सुदुरपश्चिम खबर
वास्तु मिलेको घरमा बस्दा मिल्छ सुख, सौभाग्य र आयु आरोग्य, हुन्छ वृद्धि !!
वास्तु शब्द संस्कृतको मुल शब्द ‘वास’ बाट आएको हो । वास्तु शब्दले निवासलाई बुझाउँछ । सबै किसिमका प्राणीका लागि आवासको छुट्टै महत्व हुन्छ र सबै प्राणीका आ–आफ्नै प्रकारका आवास हुने गर्छन्।
सरल भाषामा भन्नुपर्दा वास्तु भनेको बस्ने ठाँउ हो । आधुनिक संसारमा वास्तुशास्त्रलाई आर्किटेक्चर भन्ने गरिन्छ । पुराना वास्तुशास्त्रका ज्ञाताहरुले लौकिक पिण्डबाट प्राप्त हुने गुरुत्वाकर्षण लगायत विभिन्न तरङ्गहरुले मानव मन मस्तिष्कमा र मानव स्वास्थ्यमा असर पार्छन् र वास्तु मिलाएर बनाएको घरमा त्यस्ता तरङ्गहरुको उचित व्यवस्थापन गरि मानव जीवनमा सुख, शान्ती, समृद्धि र सुस्वास्थ्य प्राप्त गर्न सकिने कुरा उल्लेख गरेको पाइन्छ । पाँच तत्वको समिश्रणबाट समग्र वास्तुशास्त्र अडिएको हुन्छ। ती पाँचतत्वहरु यस निम्नअनुसारका छन।
ठूलो वेदना र पिडाले प्रताडित प्राणी आफ्नो गृहमा प्रवेश गरेपछि एउटा सुखको अनुभूति गर्छ । स्वगृहमा (आफ्नो घरमा) आफ्नो घरपरिवारको माया ममता प्राप्त हुन्छ । शत्रुको भय र अरुको अवरोधको डर हुदैन । तसर्थ पूर्ण स्वतन्त्रताको आभास मिल्छ । यसर्थ स्वगृह एउटा महत्वपूर्ण स्थान हो जहाँ मानव लगायत सबै प्राणीहरु खुशी र आनन्दले रहेका हुन्छन्।
वास्तुशास्त्रमा भूखण्डको छनौट कसरी गर्ने भन्ने सम्बन्धमा पनि उल्लेख गरेकोे पाइन्छ । हावा, प्रकाश प्राप्त हुने गरि चारैतिर खुल्ला स्थान राख्न उपयोगी हुने कुराको सुझाव रहेको छ । घर नजिकै खुल्ला नाली भएको ठाँउ अशुभ मानिन्छ । उत्तरततर्फ र पूर्वततर्फ सडक भएमा शुभभुखण्ड मानिन्छ।
वास्तुसम्मत तरिकाले घरको झ्याल ढोकाहरु राख्न सकिन्छ । घरमा हावा र प्रकाशको तालमेल मिलाउनु पनि अत्यन्त जरुरी रहन्छ । बैठक कोठाको झ्याल ढोकाहरु अन्य स्थानको भन्दा अलि ठूलो ७÷८ फिटसम्म चौडा र उचाइले युक्त हुनुपर्छ । बैठक तथा भान्साको पर्खाल अग्लो बनाउनउत्तम हुन्छ।
मान्छेले जन्मैदेखि मृत्यूपर्यन्त आफ्नो अधिकांश समय भवन (घर) भित्र बिताउँछ । घरमा रहेका यी पञ्चतत्वको विज्ञान र त्यसको प्रभावको बोध गरेर उचित तवरले निर्माण गरेको घरमा बस्नाले सुख, सौभाग्य र आयु आरोग्यको वृद्धि हुन्छ । नयाँ पुस्ता बाट सभार
यी चार आनीबानीहरु, जसले शरीरलाई निरोगी बनाउँछ !!